C/salaam Hadliye Cumar, ayaa ka hadlay sababta keentay inay la saftaan Dowladda Boqortooyada Sacuudi Carabiya, – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliya, C/salaam Hadliye Cumar, ayaa ka hadlay sababta keentay inay la saftaan Dowladda Boqortooyada Sacuudi Carabiya, xilli xiisad siyaasadeed kala dhaxeyso Iran.
“Anaga waxaan sii deynay War Saxaafadeed aan leenahay in Axdigii Vienna la ixtiraamo, inay tahay wax aad muhiim u ah diblomaasiyadda wadamada kala duwan ee adduunka ee Axdiga Vienna ku jira. Sida foosha xun ee loo weeraray Safaaradda Sacuudiga inaanan ku taageersanayn, kuna raacsanayn Iran, kana soo horjeedno, Dowladda Iran-na ay masuuliyadeeda garato.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC, ayaa yiri “War Saxaafadeedka aan sii deynay, waxaan u maleynayaa inay ku filan tahay, mowqifkayaga halkuu taagan yahay in la arko.”
Isagoo hadalkiisa sii wata, ayuu yiri “Anagu waxaan taageernay wixii xaq ah iyo waxaan aragnay inay dhaceen. Dowladda Sacuudigu waa dowlad aan saaxiib nahay, waa dowlad uu wadankoodu uu Xaramku ku yaalo, waa dowlad cilaaqaad fiican inagala dhaxeeyaan. Waana taageersanahay.”
Waxa kaloo uu yiri “Waxaan ku taageersanahay waxyaabo badan baanu isku taageersanahay, dadkeenaa ku nool, ganacsigee nala sameeyaan. Marka taasi maaha wax cusub.”
Mar la weydiiyay inay jiraan diblomaasiyiin reer Iran ah oo lagu amray inay isaga baxaan Magaalada Muqdisho, ayuu beeniyay waxa ka run ah arrintaasi.
“Maya majirto. Waxaa jira niman Iraniyiin ah oo ayaan dhaweyd ay Nabad Suggidu meel aan loo baahnayn inay jooggaan, iyagoo joogga ka soo qab qabatay, welina way jooggaan wadanka.”
Su’aal ahayd sida uu xilligan yahay xiriirka Somaliya iyo Iran, ayaa wuxuu ka dhawaajiyay in sidiisii uun uu yahay, isla-markaana aanu jirin wax ku soo kordhay amaba ka naaqusay.
“Sidii uu awal ahaa uun weeye. Dowladda Iran waa dowlad aan cilaaqaad leenahay, uma jeedo wax cusub oo wayn oo ka dhacay ama ku soo kordhay. Laakiin arrintan anagu Sacuudigaa ku taageernay, waxaa weeye arrin cad, oo aan kuna taageersanahay.” Ayuu yiri Wasiir Hadliye.